KOREA ASEAN COMMEMORATIVE SUMMIT (MYANMAR PERFORMANCE)
Posted by Gentle Men at 1:49 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 9:03 AM No comments:
ကမ်းခြေမှာ ကောက်ကြောင်းအလှပြလိုက်တဲ့ မက်ကယ်ဖီး
ဗြိတိန်တယ်လီဗေး ရှင်းအစီ အစဉ် 'Hollyoaks' ရဲ့ မင်းသမီး တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဂျနီဖာမက် ကယ်ဖီးဟာ Ibiza ကမ်းခြေမှာ အရမ်းကို Sexy ဖြစ်တဲ့ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခံခဲ့ပြီး နောက် တစ်ဟုန်ထိုးနာမည်ထွက်လာခဲ့ ပါတယ်။
အသက်၃၂နှစ်အရွယ် မက် ကယ်ဖီးရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံက ဂျနီဖာ ဂျိုအန်းမက်ကယ်ဖီးဖြစ်ပြီး သူဟာ ခန္ဓာ ကောက်ကြောင်း အလှတွေကို မဖုံးနိုင်မဖိ နိုင်ဖြစ်စေတဲ့ one-piece ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေ လိုက်တဲ့အခါ ပုရိသ အပေါင်းက တစ်ခဲ နက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူဟာ အသား အရေ အလှကိုတော့ သဘာဝ အတိုင်းထားရှိပြီး မိတ်ကပ် လိမ်းခြယ်ခြင်း မပြုခဲ့ပါဘူး။
'Hollyoaks' ရဲ့ Channel အစီ အစဉ်မှာ မာစီဒီးမက်ကွင်း အဖြစ်သရုပ် ဆောင်ထားတဲ့ မက်ကယ်ဖီးက ဒီလိုခန္ဓာ အလှရ ရှိအောင် ဘယ်လိုကြိုးပမ်းခဲ့ ကြောင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ ဟာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတွေ လေးလခန့် အနားယူခဲ့ပြီး အားကစားခန်းမမှာ လေ့ ကျင့်ခဲ့လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစား အစာတွေရွေးချယ်စားသောက်ခဲ့ကြောင်း နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းရေးအ တွက် Lighterlife Fast ဆိုတဲ့ ဝိတ်ချဆေး တစ်မျိုးကို မှီဝဲခဲ့ကြောင်း ပြောပြသွားခဲ့ပါ တယ်။
Posted by Gentle Men at 4:43 PM No comments:
စာရေးဆရာ ဦးသန်းဆွေ (ထားဝယ်) သစ္စာဆိုပြီး ပြောသွားတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အကြောင်းအရာ
မနေ့က စာရေးဆရာ ဦးသန်းဆွေ (ထားဝယ်) သစ္စာဆိုပြီး ပြောသွားတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အကြောင်း အရာ အဖြစ်အပျက် ကလေးတွေ။ လူတွေမသိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေမို့ ဗဟုသုတ ရစေဖို့ အနှစ်ချုပ်မှတ်သားမိသမျှ ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါတယ်။ (-) ကွင်းခတ် ရေးသားထားသော စာသား များသည် ကျွနုပ်၏ ပြောကြားလိုသော စကားများကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
လူ့အခွင့်အရေး ဘာမှန်းမသိ ဒီမိုကရေစီ ဘာမှန်းမသိ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေကြတယ်။ တစ်ခါက "ဤလူ့ဘောင်တွင်"ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာမင်းသမီးမြင့်မြင့်ခင်ကဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ"မြန်မာပြည် လွတ် လပ်ရေး ရတာနဲ့ လမ်းဘေးမှာ သေးပေါက်လို့ ရမှာလား" ဆိုသလို ဖြစ်နေကြ တယ်။ ~~~~~~~~~
မဲဆွယ်တာမဟုတ်။ ဘယ်သူ့မဲပေးပါလို့လည်းမပြောပါ။ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အရေးဘဲစိတ်ဝင်စား တယ်။ မဲစာရင်းမှာပါ မပါတောင် သွားမကြည့်ဘူး ဆိုသူတွေ။ ဒေါ်စုနိုင်ရင် ဗြိတိန်နဲ့ အမေရိကန်က အကူ အညီတွေ ရောက်လာပြီး မြန်မာပြည် နတ်ရေကန်ထဲ ချလိုက်သလို ချက်ခြင်း ပြောင်းလဲသွားမယ် ထင် တဲ့သူတွေ ရှိနေလို့ ပြောချိန်တန်လို့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးလည်း သံယောဇဉ်
Posted by Gentle Men at 8:57 AM No comments:
ကိုယ်တိုင် ထောက်ခံဆန္ဒပြုထားတဲ့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို
အခုထိကန့်ကွက်နေသေးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို "အမေစု"မှ "အမေစု"လို့ မျက်စိမှိတ် ကိုးကွယ်ပြီး သံဃာတွေ ကိုစော်ကားနေသေးတဲ့ "လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေ" ကို နတ်မောက်သမိုင်း ရိုင်းမှာ ကျန်မှာ စိုးလို့ မေ့ထားတဲ့ တချို့အချက်တွေအမှန်အတိုင်းသိစေ
ရအောင် ဖော်ကောင်ဘညွန့်ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် (၁၉၄၇) ဗိုလ်ချုပ်ကွယ်လွန်ချိန်ကစပြီး ရှင်းရမယ် ။
အဲဒီအချိန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၂)နှစ်သမီးပ ရှိသေးတယ် ။
(၁၆/၁၇)နှစ်မှာ အင်္ဂလန် အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ် ၊
ဒါဆို - ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းအစိုးရ
အာဏာသိမ်းတာ ၁၉၆၂ နော် ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သေပြီး (၁၅)နှစ်ကြာမှ ဗိုလ်နေ၀င်းအာဏာ စရတာ ၊ အဲဒီအချိန်
Posted by Gentle Men at 1:59 PM No comments:
လို့ဆိုနိုင်ပါ တယ်။ဒီတော့ ခေတ်ပေါ်
ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ဖုန်းတွေလည်းပေါ ပေါများများရှိကြသလို ၊
ကျွန်တော် တို့ မှတ်ဥာဏ်မနည်းသေးပါဘူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
လူဆိုတာ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ အတိတ်နဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့နေထိုင်တာမျိုးဖြစ်
တယ်။ဒီတော့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ယခုဘာလုပ်နေလဲ ၊ ယခင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ
ဆုံးပြောရရင် အလုပ်တစ်ခု လျှောက်တော့ မယ်ဆိုရင်တောင် ယခင်ကပစ်မှုကျူးလွန်ဘူးလား ၊ ရပ်ကွက်မှာအော့ကြောလန်သူလား ၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းရဲ့လား ဆိုတာမျိုးနဲ့ အလုပ်ခန့်မယ့်အလုပ်ရှင်က ဆန်းစစ်ကြရ
Posted by Gentle Men at 12:08 PM No comments:
NLD ပါတီဝင်တွေ၊ ထောက်ခံသူတွေက
ဒေါ်စုကို ကာကွယ်တယ်။ အမျိုးသားရေး
အဖွဲ့တွေက ဒီအချက်ကို စိုးရိမ်နေကြတယ်။
ကဲ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရှင်းရှင်း
လင်းလင်း ဖြစ်အောင် ဒေါ်စုကိုယ်
တိုင် နောက်ဆုံး ပြောထားတဲ့
“ရိုဟင်ဂျာအပေါ် ဒေါ်စု သဘောထား” ကို ဒီမှာ ဖတ်၊ ဒီမှာကြည့်ကြပေတော့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဒီနေရာမှာ လူထုကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ သဘောဆန္ဒတွေထဲမှာ လူထုအ
Posted by Gentle Men at 10:53 AM No comments:
အလွန်ပွဲကောင်းတဲ့ ဖူကူယားမားနဲ့ လာရီဒိုင်းမွန်းတို့ရဲ့ ပွဲကို သွားခဲ့ချင်ပေမယ့် လွဲခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတစ်ဦးက အနှစ်ချုပ်ကို ပြန်ပြောပြလို့ နားထောင် လိုက်ရတယ်။ ဖူကူးယားမားနဲ့ ဧရာဝတီ မီဒီယာတို့ရဲ့ အမေးအဖြေ ကော်ပီလေး ပေးသွားခဲ့တယ်။ ဘာပဲပြောပြော ဖူကူယားမား ဆိုတာ ကမ္ဘာကျော် ပညာရှင်။ သူ့စကားတွေကို အလေးအနက် ထားသင့်တယ်။ အလကား ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ သူတွေမှ မဟုတ်တာ။
ဖူကူယားမားက အမေရိကန် သမ္မတ ရော်နယ်ရီဂင် လက်ထက်မှာ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ အကြံပေး။ သူရဲ့'သမိုင်းနိဂုံး' က လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့လည်း အငြင်းပွား ဖွယ်ရာ အတော်လေး ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အယူအဆပေါ့လေ။ ဘယ်လိုပဲ အငြင်းပွားခဲ့ပွားခဲ့ သူ့စာအုပ်တွေ
Posted by Gentle Men at 10:21 AM No comments:
- တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စဲရေး အတွက် NCA လက်မှတ်ထိုးရန် အစိုးရ အနေနဲ့တတ်နိုင် သလောက် လိုက်လျောတာကိုတွေ့ရ တယ်။ ကိုးကန့်ကို ဖုန်ကြားရှင်ဘက်ကနေ ၀င်တိုက်ပေးတဲ့AA ၊ TNLA နဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၄)ကိုလက်မခံဘူးဆို ပြီး
တင်းခံနေရာကနေ TNLA ရော ပါဝင်ခွင့်ပေးပြီး AA ကို လည်းကေအိုင်အေ အဖွဲ့အောက်ကလက်မှတ်ထိုးရင် လက်ခံ မယ် ဆိုတဲ့အထိ အစိုးရက လိုက်လျောပေး ထားတယ်။ ဖုန်ကြားရှင် ဦးဆောင်တဲ့ MNDAA အဖွဲ့ကိုတော့လက်နက်ချ ရမယ်၊လက်နက်ချမှ
Posted by Gentle Men at 10:17 AM No comments:
ဖဲကြိုးဝါလှုပ်ရှားမှု ပျဉ်းမနား NLD အီးစီ ဦးဆောင်၊ စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေးအရောင်ကန်ပိန်းများ ကျယ်ပြန့်လာစေရန် NLD ပါတီက စီစဉ်နေ
တရားလွှတ်တော်သို့ တပ်မတော်မှ အရာရှိများ ရောက်ရှိလာမှုကို ကန့်ကွက် သည်ဆိုပြီး ဖဲကြိုးဝါတပ်ဆင် လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်သူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်မှာ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ် သည်ဟု သိရှိရသည်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန သို့ တပ်မတော်အရာရှိများ ပြောင်းရွေ့ရောက်ရှိမှုအား ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် ဖဲကြိုးနက် လှုပ်ရှားမှုကို
Posted by Gentle Men at 9:56 AM No comments:
လူတစ်ချို့က အပြောင်းအလဲကို လိုချင်လို့ NLD ကို မဲပေးမယ် ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ NLD က အပြောင်းအလဲကို မဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးထင်လို့၊ NLD မပါမှ အပြောင်းအလဲဖြစ်မယ်ထင်လို့၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံက ပြောင်းလဲချိန်
တန်နေပြီ ဖြစ်လို့ NLD ကို မဲမပေးပါလို့ ပြောချင်တယ်။
NLD က ၁၉၈၈ ကနေဖွဲ့စည်းခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၂၇ နှစ်ကျော်ပါပြီ။ စဖွဲ့ထဲကနေ အခုထိ ဘာလုပ်ဖို့လဲ ဆိုတာ မေးရင် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ခဏထား၊ အာဏာရရေးအတွက်ဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံတယ်။ NLD ကို ဖိနှိပ်ခဲ့တယ် လို့ ပြောကြတယ်။ ဖိနှိပ်ခဲ့ရအောင် လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ ကျွန်တော်သိတယ်။ အချိန်တိုင်း စကားမတည်ခဲ့တာ NLD ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တယ်။ ၂၀၁၂ မှာ ပြန်ဝင်လာတယ်။ ကြားဖြတ်မှာ
Posted by Gentle Men at 9:37 AM No comments:
လူ့အခွင့်အရေးကိုဗန်းပြပြီး အမျိုးသားရေးကို ချနင်းခဲ့လေသလား….? Sep 17, 2015
ပြဒါး တစ်လမ်းသံ တစ်လမ်းဖြစ်နေ သည့်
သွားရောက်ကာ မဲဆွယ်စည်းရုံး ဟောပြောမှု များ ပြုလုပ်မည်ဟု ကြားသိလာရသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန် သူ
Posted by Gentle Men at 9:30 AM No comments:
"ပြောင်းဖို့မသေချာပေမယ့် လဲဖို့သေချာတယ်" - မောင်သွေးချွန် Sep 17, 2015
၆-၉-၂ဝ၁၅ထုတ်ဆဲဗင်းဒေး နေ့စဉ် သတင်းစာ မှာ မောင်နံ့သာရဲ့ 'စောလူးလို အတွေးနုံ့ ရင်ဖြင့်' ဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ သူ့ဆောင်းပါးထဲမှာ ကျွန်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာကြောင်းတချို့ပါလာတယ်။
'ဒီကြားထဲ စာရေးဆရာတစ်ယောက် က ဒေါ်စုနိုင် ရင် မွတ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ နီးစပ် သွားပြီ ဆိုပြီးရေးလို့ သူ့သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ အရင်းတွေကတောင် ဝေဖန်တာတွေ ဖတ်ရတယ်။ အဲဒီစာရေးဆရာ က ဒေါ်စုလွတ်ခါစ
Posted by Gentle Men at 9:21 AM No comments:
တစ်ချို့ကလဲ NLD ကို ငါးနှစ်လောက်
အသုံးမကျလဲ ငါးနှစ်ပဲခံရမှာ၊ ၂၀၂၀ ကျရင် ပြည်သူက ဆက်မရွေးဘူးပေါ့လို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီစကား အပြည့်အဝမမှန်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ ၂၀၁၆ မှာ NLD အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့လို့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ
Posted by Gentle Men at 9:10 AM No comments:
စုကြည်ကိုမေးဖူးတယ်။ ကမ္ဘာမှာ OIC အစ္စလာမ် နိုင်ငံပေါင်း ဘယ်နှယ်နိုင်ငံရှိ လဲတဲ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မဆိုင်း မတွ ၅၅ နိုင်ငံပါလို့ ဒေါက်ကနဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ ဆရာတော်ကြီးက ထပ်မေးတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စဉ်းစားမရ ဘူး။တွေတွေကြီးရပ်နေတယ်။
သီတဂူဆရာတော်က ၅ နိုင်ငံပဲရှိတယ်
Posted by Gentle Men at 9:07 AM No comments:
“ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ ဆက်လုပ်မယ် ဆိုရင် လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကြိုဆိုတယ်” Sep 17, 2015
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာချိန်တွင်
ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအရ အသုံးချ၍
မဲဆွယ်ခြင်း၊ အသုံးချခြင်းများ ရှိလာ နေပြီး
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ဘာသာရေး အကြောင်းပြုသည့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပွား လာမည်ကို စိုးရိမ်သူများလည်း ရှိနေသည်။ လက်ရှိ အချိန်တွင် အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ (မဘသ) က လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် မည်သည့်
Just The Way You Are ► Pinoy Romance ♥ Philippines Movies ♣ Tagalog Movi...
Posted by Gentle Men at 8:23 AM No comments:
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် NLD ပါတီတွင်းရန်ပွဲ ၉ ဦး ဆေးရုံတင်ထားရ
သြဂုတ်လ၂၉ရက်စနေနေ့က မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြိုနယ်ရှိNLD ပါတီဝင် အချင်းချင်း အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပါတီဝင်အချို့ ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် NLD အမတ် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းအား ထောက်ခံသည့် ရက်ကွက် ၆ ခုမှ ပါတီဝင်များနှင့် မထောက်ခံသည့် ရက်ကွက် ၁၄ ခုမှ ပါတီဝင်အချင်းချင်း စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ အုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်နှက်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ၉ ဦးဆေးရုံတင်ထားရကာ ၂ ဦးမှာ ဦးခေါင်းထိထားပြီး စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် ရက်ကွက်ပေါင်း ၂၀ ရှိသော်လည်း ရက်ကွက် ၄ ခုက တစ်ဖက်
Posted by Gentle Men at 8:19 AM No comments:
၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က
ဆရာမလေး နှစ်ယောက် ကို သတ်သူမှာ ၎င်း ကချင်ရွာသား အားတီ ဖြစ်သည်ဟု DNA စစ်ဆေးမှု အရ ဖော် ထုတ် တွေ့ရှိပြီ။
အားတီမှာ ရွာမှ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားပြီး KIA တပ်ရင်း
Posted by Gentle Men at 8:14 AM No comments:
ဘဏ်ငွေစာရင်းတစ်ခုမှလွဲ၍ ကျန်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားချက်သည် လိမ်ညာခြင်းသာ ဖြစ် ဟု ဆို
သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်က နေပြည်တော်ခရိုင်အတွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၄င်းတွင် ဘဏ်ငွေ စာရင်း တစ်ခုမှလွဲ၍ ကျန်ပိုင်ဆိုင်မှုများ မရှိကြောင်း ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိပ်သာ လမ်းရှိ ခြံအမှတ်(၅၄)နှင့် နေပြည်တော် ရှိ နှင်းဆီစံအိမ်တို့မှာ ၄င်းပိုင်ဆိုင်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောကြားချက်ကို
Posted by Gentle Men at 8:10 AM No comments:
စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၅
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မြန်မာပြည်ရဲ့ မီဒီယာတွေအပေါ် အမှန်အတိုင်းရှုမြင်မိတာလေးတစ်ခု
ထောက်ပြရေးမိ ပါတယ်။ ကြိုဆိုသူ ရှိသလို အနာပေါ်တုတ်ကျသွားတဲ့ မီဒီယာသမားလက်ဝေခံ တချို့ကတော့ ကက်ကက်လန် ပြန်ပြီး ရန်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်မီဒီယာသမားတချို့ ဘက်လိုက်လွန်းတယ်။ အမှန်တရားကို ရှုမြင်နိုင်မှု အားနည်း
Posted by Gentle Men at 8:05 AM No comments:
ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အများဆုံး ဖမ်းမိခဲ့သော မူးယစ်ဆေးဝါးမှုမှ လူ ၁၂ဦးအား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အများဆုံး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော WY မူးယစ်ဆေးဝါး အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူ၁၂ဦး အား မြန်မာနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြန် ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လူ ၁၂ ဦးတွင် အမျိုးသား ၁၀ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၂ ဦး ပါဝင်ကာ ၄င်းတို့၏ ဓာတ်ပုံများအား
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလျှင် “သေဒဏ်မှတစ်ပါး အခြားမရှိ”
မီဒီယာများဖော်ပြချက်အရ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာသတင်းများ ဆက်တိုက် ဖတ်နေရပါတယ်။ မုဒိမ်းသမားကြောင့် ငါးနှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေးတစ်ဦး သားအိမ်ထုတ်ရတဲ့အထိ အခြေအနေဆိုးခဲ့ပြီး ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ လွန်စွာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါ။
၂၆.၈.၂၀၁၅ ရက်နေ့ထုတ် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတစ်စောင်တည်းမှာပင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊
Posted by Gentle Men at 8:00 AM No comments:
တွေအပြင် ယဉ်ကျေးမှု တွေပါ
နယ်ချဲ့ လာတဲ့ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုက ခုဆိုရင် မြန်မာ့မြေပေါ် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီး...။ နယ်ချဲ့တယ်ဆိုတာ လက်နက်ဆွဲကိုင်ပြီး
Posted by Gentle Men at 9:31 AM No comments:
မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း NLDပါတီ နဲ့ ၈၈မျိုးဆက်(ငြိမ်း/ပွင့်)တို
့ပူးတွဲကြေညာချက်Joint StatementကိုColour Designနဲ့ဝေဝေဆာ ဆာဖြန့်ဝေပါတော့မယ်။
အဲဒီပူးတွဲကြေညာချက်ဟာ ၈၈အဖွဲ့ ဝင်အားလုံးရဲ့ 
အဲဒီပူးတွဲကြေညာချက်ဟာ ၈၈က မင်းကိုနိုင်။ဂျင်မီ တို့ ၂ ဦးတည်းရဲ့ အတည်ပြုချက် သာဖြစ် ပါ
Posted by Gentle Men at 9:22 AM No comments:
ပါတီတစ်ခုအတွင်းကိစ္စဟုသဘောထားပြီး ရွးကောက်ပွဲအတွက်စိုးရိမ်သည်ဟုသာ အနည်းငယ်ဋ္ဌပြောသွားသည်။ ဤသည်က နိုင်ငံတကာ အခြေ အနေ၊ ပြည်တွင်းအခြေအနေအရ မူအားလုံးက စိတ်ဝင်စား ဟန်ပြခဲ့ကြပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်မှာမူ ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်ကို ရုတ်တရက် ဖျက်သိမ်းခဲ့၍ ပန်လာသည်။ အခြား နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ များက နိုင်ငံရေးသမားများ၏ အင်တာဗျုး အရ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
အနာဂတ်ကို ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ဆိုထားသည်ကိုမတွေ့ရ။ မြန်မာနိုင်ငံ
ကိုးကန့်၊ တအာင်း နှင့် ရခိုင်(AA) အဖွဲ့များ လက်နက်စွန့်ရမည်ဟု ကာချုပ်ပြော
တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် မြန်မာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာ မိတ် တပ်မတော်(MNDAA) ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့၊ ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA)၊ ပလောင်(တအာင်း) လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်(TNLA) ၃ဖွဲ့ အနေဖြင့် လက်နက်စွန့်ရမည်ဟု ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)ဖြင့် မနေ့က တွေ့ဆုံ
Posted by Gentle Men at 9:12 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး၏ ပြောကြားချက်များ
( တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှို င်
အားနေပြည်တော်တွင် ၁၉ - ၈ - ၂၀၁၅
ရက်နေ့တွေ့ဆုံခြင်း --- မြန်မာနိုင်ငံ
ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Colonel Antony David Stem တို့ တက်ရောက်ကြသည်။ )
(၁) ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တပ်မတော်များက မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ရေဘေးနှင့် သဘာဝဘေးဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကူညီခဲ့မှုများအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု
Posted by Gentle Men at 9:09 AM No comments:
ရွးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဘက်လိုက်တာလား၊NLD　က　အခွင့်ထူးခံတာလား
မကြာခင်မှာ ၂၀၁၅ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကြီးစတင်ပါတော့မယ်။စတင်တော့မည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါတီအားလုံး ဟာလည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စာရင်းတွေ တင်သွင်းပြီးဖြစ်သလို ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များ ဟာလည်း တက်ကြွတဲ့ ကြက်ဖဆိုသလို သတ်မှတ်မဲဆွယ်ကာလကို စောင့်ဆိုင်း
နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပါတီတွေဟာ သတ်မှတ်မဲဆွယ်ကာလကို ဘာကြောင့် စောင့်ဆိုင်းနေ ကြသလဲဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ မဲဆွယ်ကာလမဟုတ်ပဲ မဲဆွယ် ရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် စည်းကမ်းနဲ့ငြိစွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
Posted by Gentle Men at 9:04 AM No comments:
NLD က ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှု
ပြဿသနာလေးတွေ ရှိနေတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကလဲ အကွဲအပြဲဇာတ်လမ်းလေးတွေ ရှိနေတယ်၊ တပ်မတော်နဲ့တစ်ခြားအဖွဲ့တွေကလည်း မစဉ်း စားလို့မရတဲ့ အခြေအနေဆိုတော့ လက်ရှိမြန် မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ ၂၀၁၅ အလွန် ကာလကိုဘော်ဒါတွေဆုံတဲ့အခါပွားလို့ ရအောင် တွေးမိသလောက်သုံး သပ်ကြည့် တာ ပါ။
NLD ဆိုတာက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သေချာပေါက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မှုအပြည့်ထားထားတဲ့
Posted by Gentle Men at 9:54 AM No comments:
'တူဖြစ်တုန်းကနှံခဲ့ပြီး ပေဖြစ်တဲ့အလှည့်မှာ ခံလိုက်ပေဦးတော့ “တိုးနိုင်မန်း”
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက နေပြည်တော်ညတစ်ည ရဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို သတင်း မီဒီယာတွေ၊ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတွေအားလုံး စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီည အလွန်၊ နံနက်မှာတော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကသူရဦးရွှေမန်းကို ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူး ကနေ ဖယ်ရှား လိုက်ပြီ ဆိုတဲ့သတင်းတွေ တက်လာပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လူပြောင်းစာရင်းထွက်လာ ပါတော့တယ်။
သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ အားထားရတဲ့ သားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဦးတိုးနိုင်မန်းကို The Messenger Media က
Posted by Gentle Men at 9:42 AM No comments:
သတင်းမီဒီယာဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင်လို့ ပြောကြပါတယ်။ မီဒီယာသမား များဟာ ဘက်လိုက်မှု ကင်းရပါမယ်။ အမှန်တရားဘက် ရပ်တည်နိုင်ရမယ်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဘယ်ပါတီ မဆို ဝေဖန်ထောက်ပြ ရဲရမယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သတင်းမီဒီယာသမားဟာ စက်ရုပ်လိုလူသားဖြစ်ရမယ်။ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ သတင်းရေးလို့မရဘူး။ မကြောက်တရားကို
မြန်မာစာသင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ များလာတာ မြန်မာနုိုင်ငံသားတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ပဲ။ သူတို့ကြောင့် မြန်မာ့ပုံရိပ်ထိနိုင်တယ်၊ မြန်မာ့သိက္ခာကျနုိုင်တယ်။
facebook မှာ မကြားဝံ့မနာသာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆဲဆိုထားကြတာတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်လူတွေကို သူတို့ အထင်သေးကြတော့မယ်။ မြန်မာဆိုတာ ယဉ်ကျေးတဲ့လူတွေလို့ သူတို့ အရင်က ကြားထား၊ ဖတ်ထားတာတွေကို မေ့ပစ်လိုက်ကြတော့မယ်။ ဆဲတာဆိုတာဟာ ၀စီဒုစရိုက်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ၊ အရက်ဝိုင်းမှာ ဆဲတာက ကိုယ့်နားပတ်ဝန်းကျင် တင် ထိခိုက်တာ၊ fb မှာက လူထောင်သောင်းသိန်းရှေ့မှာဆဲတဲ့အတွက် လူသိန်းနဲ့ချီ ထိခိုက်စေတဲ့
Posted by Gentle Men at 9:27 AM No comments:
မိမိကိုယ်ကို တော်သည်၊ တတ်သည်ဟု ထင်သူများသည် သင်ပေး၍ မရသူများဖြစ်ပြီး ထိုသူများနှင့် လက်တွဲအလုပ် မလုပ်လိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထုတ်ဖော်ပြောကြား
Saturday, August 08, 2015 Myanmar Express Group
From : ...ပြည်သူ့အာဏာ
စည်းရုံးရေး ခရီးသွားရောက် စဉ် ပဲခူးတိုင်း ပျဉ်ပုံကြီးတွင် ပြည်သူလူထုအား မဲဆွယ်စကားပြောရာတွင် အမတ်လောင်းရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိကိုယ်ကို တော် သည်၊ တတ်သည်ဟု ထင်သူများသည် သင်ပေး၍ မရသူများဖြစ်ပြီး ထိုသူများနှင့် လက်တွဲအလုပ်
ဖြစ်စဉ်များတွင် ဒေသခံ တပ်မတော်သားများ
က၀င်ရောက်ကူညီကြသည်။နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်နေသည့် စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများနှင့် လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများတွင် အထင်အရှားတွေ့မြင်နိုင်သည်။ တပ်မတော် ဦးစီးချုပ် နှင့် ဒုတပ်မတော်ဦးချုပ်
တို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျင် ရေဘေးသင့်ဒေသများသို့ သွားရောက် ၍ အားပေးကူညီ ထောက်ပံ့မှု
Posted by Gentle Men at 10:08 AM No comments:
ပခုက္ကူမြို့နယ် NLD ဥက္ကဌဟောင်း ဦးသန့်ရှင်း၏ ပခုက္ကူမြို့နယ်သူနယ်သားများသို့ တိုက်တွန်းချက်
ပခုက္ကူ မြို့နယ်သူ မြို့နယ်သားများသို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်
ပခုက္ကူ မြို့နယ်သူ မြို့နယ်သား အပေါင်းတို့ NLD ဗဟို၏ ပခုက္ကူမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်မှုက နိုင်ငံရေး
NLD ဗဟိုက ပခုက္ကူကိုယ်စားလှယ်လောင်းလျာထားရန် မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့်အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့တို့ကို ရွေး ချယ်ရေးမူ ချမှတ်ကာ တာဝန်ပေးလိုက်သည်။ ထိုတာဝန်ကို ဗဟိုမူအတိုင်း လျှို့ဝှက်မဲခွဲ ဆုံးဖြတ် လျာထားပေးလိုက်သည်။ ထိုလျာထားချက်ကို တိုင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့တို့ကလည်း ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့သည်။ ထိုကိုယ်စားလှယ်(၄) နေရာ အားလုံးကို ဗဟိုက ပယ်ချခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီမဟုတ် ဘဲ အောက်ခြေပါတီနှင့်
Posted by Gentle Men at 9:55 AM No comments:
ခင်ဗျားဟာ ၈၈ နဲ့အတူပေါက်ဖွားလာတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် အလေးအနက်ကိုယုံကြည်ပါတယ်။ကျနော်တို့ ဟာလည်း၈၈ နဲ့အတူ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်များဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားဟာ ကျနော် တို့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေကိုစော်ကားလိုက်ရုံ သာမက လူထုကိုပြောတဲ့စကားမှာ ခင်ဗျားဟာ လူကိုမကြည့် ပဲပါတီ ကိုသာ မဲပေးပါဆိုတာကတော့ ခင်ဗျား လူထုကိုစော်ကားလိုက်တာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည်။ကျနော်အပါဝင် ခင်ဗျားကိုချစ်ခဲ့ ခင်ဗျားကို ၀ိုင်းရံခဲ့ကြာသူတွေဟာ အုတ်ရိုးနဲ့သံတိုင်ကြားမှာ
ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းမှ သတင်းထောက်တစ်ဦး အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ အတွက် ပြည်သူများအား စည်းရုံးပေးရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်း လက်ခံရရှိ
BBC Burmese reporter got 10000 $
to do campaign for Myanmar Lower
According to unconfirmed news leak,
to do campaign for Myanmar Lower House Speaker.
“It is an agreement I heard that one reporter from BBC Burmese got 10,000,000
Posted by Gentle Men at 9:43 AM No comments:
NLD ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန် ပါတီဝင်များကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဆက်ဆံဟု ဘိုကလေး NLD ခေါင်းဆောင် ပြောကြား
NLD အောင်နိုင်ရေးရုံးသို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေး
ချယ်ရေး ပြန်လည်စိစစ်ပေးရန် သွားရောက်ခဲ့သော
ဧရာဝ တီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့နယ် NLD အဖွဲ့ဝင်များ
အား NLD CEC ဦးဝင်းထိန်က အာဏာရှင်ဆန်ဆန်
ဆက်ဆံခဲ့ ကြောင်း ဘိုကလေး NLD အလုပ်အမှုဆောင်
ဦးအောင်မြင့် က ပြောသည်။
''မြေနီကုန်းအောင်နိုင်ရေးရုံးကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဦးတင်ဦး ရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘိုကလေး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တော့ ဧရာဝတီတိုင်းဥက္ကဋ္ဌဒါက်တာမျိုးညွန့်နဲ့ ဦးတင်ဦး နဲ့ စကားပြောတာကို ရပ်စောင့်နေပြီး အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းထိန်က ဦးတင်ဦး ကို ပြောတယ်။ အန်ကယ် အနားယူပါလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အမိန့်ချတယ်။ ဘာပြဿနာမှ မဖြေရှင်းပါနဲ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့တွေက
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်များ
၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်အများစုကို အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်လောင်းတွေအဖြစ် လက်မခံပဲ ပယ်ချခဲ့ တဲ့အပေါ်စိတ်ပျက်မိကြောင်း ပြည်ပရောက် ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုကိုစတင် ဦးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည် တွင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အနေ နဲ့ ရရှိထားတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့
Posted by Gentle Men at 12:48 PM No comments:
အားလုံးသိကြပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ၈၈ မျိုးဆက် ပွင့်လင်း အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်နဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ယောက် အင်န် အယ်လ်ဒီပါတီအလံတော်အောက်ကနေ အမတ်လောင်းတွေ အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ စာရင်းတင်ပါတယ်။ နှစ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအကြား ဘယ် လို ညှိနှို
Posted by Gentle Men at 9:58 AM No comments:
စနေနေ့ ညနေက ကွာလာလမ်ပူမြို့က
Plaza Lowyat မှာ စခဲ့တဲ့ တရုတ် မလေး ပြသနာက ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် မလေး ၁၀၀ ခန့် မှ ဈေးကို ၀ိုင်းထား ခဲ့ပါသည်။ မြင်မြင်သမျှ တရုတ်များကို ရိုက်နှက် ရန်ရှာ ရန်ဖြစ်သည်။ တရုတ် မလေး အထိကရုန်း ဖြစ်မည်ကို လူတော်တော်များများ စိုးရိမ်နေကြသည်။
Plaza Lowyat ရှိ Oppo ဖုန်းဆိုင်တွင် မလေး တစ်ယောက် မှ ဖုန်းဝယ်ချင်ယောင် ဆောင်ပြီး ဖုန်းခိုးပါသည်။ ဖုန်းခိုးမှန်း သိသောကြောင့် ဆိုင်ရှင် တရုတ်မှ ရဲအား ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီး ဖမ်းစေပါသည်။
ရဲလည်း သူ့လူမျိုး မလေးကို ဖမ်းသွားပြီး ခဏ အကြာ ရဲစခန်းမရောက်ခင် လမ်းတွင် လွတ်ပေးလိုက် ပါ သည်။
ထို မလေးသည် သူငယ်ချင်း ၆ ယောက်ခေါ်ပြီး ထိုဖုန်းဆိုင်အား ရိုက်ခွဲပြီး ဖုန်းရောင်းသူအား
ကြေးမုံကို အစိုးရသတင်းစာဟုသာ နားလည် ထား သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ လူထုအကျိုးပြု
ဆောင်းပါးကောင်းများပါလျှင်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်လက်တို့တတ် သည်။
အစိုးရအာဘော်များကိုလည်း မလွတ်တမ်း သိ ချင် သဖြင့် ကြေးမုံကို နေ့တိုင်းမပြတ် ကြိုးစား ဖတ်ရသည်။ ဆိုခဲ့ပါအတိုင်း လက်ကျလက်န
Posted by Gentle Men at 8:54 AM No comments:
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၇ ။ ။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင်
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆(ခ)တွင် အကျုံးဝင်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးစဉ် လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း အား “သမ္မတ ကြီးခင်ဗျား” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က နှစ်ကြိမ်တိတိ မှားယွင်းခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၇ရက်က ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်း
Posted by Gentle Men at 8:50 AM No comments:
သစ္စာဖောက်.... စာရေးသူ Oppositeye myanmar at 3:01 PM စာပေအမျိုးအစား အတွေးအမြင်
၁၉၄၈ မှာ ပြည်တွင်းစစ် စခဲ့တယ် …
ဒီ စစ်ဟာ ….
အခုအချိန်အထိ လက်စမသတ်ခဲ့ဘူး …
MPC မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့…
လက်ရှိ ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ အစည်းပေါင်း …
၇၆ ဖွဲ့တိတိ ရှိတယ် …
ဒီအထဲမှာ ဌာနေပြည်သူ့ စစ် နဲ့…
BGF နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေ မပါဝင်ဘူး…
ဒီအဖွဲ့ တွေဟာ ..
တစ်ဖွဲ့ နဲ့ တစ်ဖွဲ့တည့်လိုက် မတည့်လိုက် …နှစ်နဲ့ ချီ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လိုက် …ခဏနေ
Posted by Gentle Men at 8:28 AM No comments:
KOREA ASEAN COMMEMORATIVE SUMMIT (MYANMAR PERFORMA...
စာရေးဆရာ ဦးသန်းဆွေ (ထားဝယ်) သစ္စာဆိုပြီး ပြောသွားတ...
တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေပဲ နာရအုံးမှာပါ.. Sep 17, 2...
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကို ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်က ပြန်ထိန်းကျောင်းရတော့မလ...
အာဏာသိမ်းခြင်းလား ၊ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြိုဖျက်ခြင်းလ...